My Notes - Page2of 10 - Just share some useful tips
March 9, 2020 by Thein Htike Aung on Meditation
Vipassana Meditation အကြောင်း တရားနားထောင်ရင်နဲ့ ဘုန်းကြီးက ဘုရားဟောသွားတဲ့ အိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာရင်​ ပြုလုပ်ရမယ့် အကြောင်းထဲက တစ်ခုက နားရွက်တွေဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘုရားက အဲ့လိုကော တကယ်ပြောသွားရဲ့လားလို့ မေးခွန်းဖြစ်တယ်။ Google ရှာကြည့်တော့ ပိဋကတ် သုံးပုံကို လွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ website မှာ မြန်မာပြန်ပါ သွားတွေ့တယ်။ တကယ့်ကို သေသေချာချာ သင်ပြသွားတာပဲ။ 🙏
February 23, 2020 by Thein Htike Aung on Meditation
Vipassana Meditation – အခြေခံ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်နည်း
Vipassana Meditation Centre Singapore shared basic practice of Vipassana Meditation. All credited to Vipassana Meditation Centre Singapore.
Session1 : https://youtu.be/rpB0K7uGees
Session 2: https://youtu.be/byOHN4pbJlY
Session 3: https://youtu.be/RYx2I7q7U7A
Session 4: https://youtu.be/5AibBHM5LLQ
January 12, 2020 by Thein Htike Aung on Uncategorized
ဘာသာရေး မနွှယ်တဲ့ mindfulness meditation
ဘာသာရေး မနွှယ်တဲ့ mindfulness meditation လေ့လာ လေ့ကျင်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးပါ။ စာအုပ် မဖတ်ချင်လဲ Headspace ဆိုတဲ့ App free download ဆွဲပြီး စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ထုတ်တဲ့ လူက အတူတူပဲ။ စာအုပ်ဖတ်တာ အချိန်တော့ ယူပေမယ့် တချို့ အကြောင်းတွေက အဲ့လို သေသေချာချာလေး ရေးထားမှ လေ့ကျင်တာ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်တယ်။ စာအုပ်က mindfulness ဆိုတာ ထိုင်တုန်း တခဏ မဟုတ်ဘဲ ၂၄ နာရီ ကာလပတ် ကျင့်တဲ့နည်းတွေကို ပြောပြထားပါတယ်။
တခြား Mindfulness နဲ့ပတ်သတ်တာကတော့ Oxford ဆရာတော်ရဲ့ တရားတွေ ကောင်းတယ်။ ဆရာတော်က Mindfulness ဟောရင် အဲ့ကြောင်းပဲ သီးသီးသန့်သန့် ဟောတယ်။ ကျင့်တဲ့လူတွေရဲ့ Video တွေပြ။ ဘယ်လိုတွေကျင့်ရလဲ ပြောပြ။ ၃ မိနစ်လောက် တကယ် ထိုင်ကြည့်ရင်း ပြောပြနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။